Jailbreak yeIOS 10.2 mukuona ... asi kwete iyo iPhone 7 | IPhone nhau
SaLuca Todesco, iyo yekubheka iyo yaive yave nemukurumbira wekusatanga chero chishandiso asi ichangobva kuvhura Yalu Jailbreak, yatodonha, ichakurumidza kuwedzera tsigiro yazvino vhezheni yeIOS, zvinoreva kuti munguva pfupi iri kutevera tichava ne jailbreak yeIOS 10.2. Dambudziko nderekuti, sezvayakafambirawo mberi, rutsigiro haizosvika kune iyo iPhone 7 uye iyo iPhone 7 Plus nekuti iyo bhaggi haipo mune dzichangoburwa smartphones dzakaburitswa naApple munaGunyana 2016.
Panguva ino pachine kusahadzika kwakawanda kuchazogadziriswa. Musi waNdira 5, Todesco yakabudiswa chigamba che chishandiso chake chakawedzera tsigiro yeiyo iPhone 6s, iPhone 6s Plus uye iPhone SE ine TSMC processor, asi akati aifanira kugadzirisa 'hombe chakakomba bug»Usati wawedzera rutsigiro rwezvimwe zvigadzirwa. Nezve izvi mupfungwa uye kunyange zvichiratidzika sezvazvinoita, ini handina 100% chokwadi kana yatovepo yakagadzirisa dambudziko rautiudza nezvazvo neChina chakapfuura kana kana icho chichavhura chichava chiitiko chinowirirana neIOS 10.2 icho chichave chinowanikwa chete kune ese majaira aive atoenderana neYalu Jailbreak kunze kweiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Luca Todesco ave kuda kuvhura jailbreak yeIOS 10.2
Changu chigamba chematambudziko ejailbreak yeIOS 10.1 ichave ichiwedzera rutsigiro rwe10.2. Chero zvazvingaitika, ivo havazoshanda pa iPhone 7 ine iOS 10.2, chete 10 uye 10.1.
Kana iri kuvhurwa kwayo, iyo inozivikanwa yekubavha, ikozvino yechinhu chakanaka, haana kutaura chero zuva. Yalu Jailbreak ichiri mubeta uye haina kutsigirwa zviri pamutemo na mobile substrateNaizvozvo, Todesco uye isu kubva pano tinokurudzira kuti vashandisi chete vanoziva zvauri kuita kana vanofunga nezvematambudziko aungatarisana nawo vanoshandisa chishandiso. Chero zvazvingaitika, iyo jailbreak yeIOS 10.2 yave pedyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Jailbreak yeIOS 10.2 mukuona ... asi kwete iyo iPhone 7
Betas adzoka: iOS 10.2.1 Beta 3, tvOS 10.1.1 Beta 2 uye watchOS 3.1.3 Beta 2